Mayelana Nathi - VOSHON INTERNATIONAL COMPANY LTD
I-VOSHON INTERNATIONAL COMPANY LTD yinkampani eneminyaka engu-16 yokuhlangenwe nakho ekuhwebeni kwamakhasimende angaphandle, futhi inikeza ukusekelwa okuhle kakhulu kwezobuchwepheshe ngemva kokuthengisa.Imikhiqizo yethu eyinhloko isiqandisi esincane, umshini wokuwasha omncane, inqola yezitolo egoqayo, inqola yemithwalo kanye nezitendi zomzila wesitimela njll. Eziningilezi zinto zisetshenziswe kakhulu ezindaweni ezifana nesitolo esikhulu, ihhotela, ibhange, indawo yokugcina impahla, izitolo zokudla, isibhedlela nokunye.Kuze kube manje, imikhiqizo yethu isithunyelwe ngempumelelo emazweni aseYurophu, e-USA, emazweni aseMpumalanga Ephakathi, e-Afrika, e-Australia nakwamanye amazwe amaningi nezifunda.
Inhloso yethu ukunikeza amaklayenti ethu imikhiqizo engcono kakhulu ngentengo encintisana kakhulu nenkonzo enhle kakhulu.Manje i-VOSHON iyaziqhenya ngokuthi singahlinzeka ngesevisi ye-ONE-STOP yesixazululo sesitolo sezitolo ngentengo yethu efanelekile kanye Nesevisi enhle kakhulu.Nge-VOSHON, uyakwazi ukuzikhulisa.Nawe, siyakwazi ukukhombisa ubuwena obuhle kakhulu.
Uma ngempela noma iyiphi yalezi zinto ikuthakasela, sicela usazise.Sizojabula ukukunikeza ikhotheshini lapho sithola imininingwane yomuntu enemininingwane.Sinonjiniyela bethu bomuntu siqu be-R&D ukuze bahlangabezane nanoma yiziphi izimfuneko, Sibheke ngabomvu ukuthola imibuzo yakho maduze futhi sithemba ukuba nethuba lokusebenza nawe esikhathini esizayo.Siyakwamukela ukuzobheka inhlangano yethu.
Lapho Ikhiqiza, isebenzisa indlela enkulu yomhlaba yokusebenza okuthembekile, intengo ephansi yokwehluleka, ifanele ukukhetha kwabathengi beJeddah.Ibhizinisi lethu.Itholakala emadolobheni kazwelonke aphucuzekile, ithrafikhi yewebhusayithi ayinazo izinkinga, izimo ezihlukile zendawo kanye nezezimali.Siphishekela "ukuthambekela kubantu, ukukhiqiza okucophelelayo, ukuxoxisana, ukwenza ifilosofi yenkampani ihlakaniphe".Ukuphathwa kwekhwalithi enhle okuqinile, isevisi enhle kakhulu, izindleko ezithengekayo e-Jeddah kuyisimo sethu esizungeze isisekelo sabancintisana nabo.Uma kudingeka, wamukelekile ukuthintana nathi ngekhasi lethu lewebhu noma ngokubonisana ngocingo, sizokujabulela ukukusiza.
Siyakwamukela ukuxhumana nathi futhi ube abahlanganyeli bethu abaqondile.